Kukosha kweGirama Yakanaka uye Nyora muBlogging | Martech Zone
Vanhu vanondiziva vanoziva kuti ndinogona kunge ndichiita girama uye punctuation geek. Kunyangwe ini ndisingazoenda kunosvika kururamisa vanhu pachena (ndinongovatuka pachivande), ini ndakazivikanwa kuronga zviratidzo zvine mazwi asina kupereterwa, maapositori akarasika, uye zvikanganiso zvakajairika.
Nekudaro, pasina chikonzero chekutaura, ini ndinogara ndichiedza kuve nechokwadi chekuti kunyora kwangu kwasvika kune grammatical snuff.
Ehe, kunyangwe pamablog.
"Asi mablog anofanirwa kunge asina kurongwa uye achitaurirana."
Kwete zvakanyanya sezvaungafunge. Kune mamwe mabhizinesi anombundira mablogging, uye ivo vari kuyedza kuratidza mufananidzo wekuvimba uye kuvimbika. Uye uzvitende kana kuti kwete, vatengi vachatonga kugona kwekambani kuita chero basa rayo rakakosha kwazvo pagirama uye chiperengo cheimwe yakaderera-chikamu PR isinganzwisisike.
“Ah Mwari wangu, makaturika chikamu! Hatichazotengazve zvigadzirwa zvako! ”
Usanditenda? Nyatsoteerera kune zvakataurwa pane chero blog yezvematongerwo enyika panguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika.
Kunyangwe iwe usingade kuisa iwo marudzi evanhu (ivo vanofanirwa kugadzikwa panzvimbo), iwe unofanirwa kuratidzira mufananidzo wehunyanzvi nehunyanzvi. Uye zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuperetera mazwi nemazvo, uye shandisa girama yakakodzera uye nyora.
Ini ndinopota ndichitumira Doug DM nezve chimwe chirevo chakakanganisika kana izwi rakapereterwa mune rimwe remazita ake eKushambadzira Tekinoroji (izvo zvichangoitika kumashure ndizvozvo Ndiri kurangwa Ini ndakakumbirwa kunyora chinyorwa ichi).
Pane yakawanda grammatical zvikanganiso izvo, kana iwe uchizviita, zvinyoronyoro zvinokuita iwe kuti uve mbeveve (Copyblogger mazwi, kwete angu). Zvinhu zvakaita sazvo vs. zviri uye iwe uri maringe nezvako zvikanganiso zvaunofanira kuziva zvirinani pane kugadzira.
Vanhu vazhinji vachati girama uye chiperengo pamablog hazvina kukosha. Kuti isu tinofanirwa kunge tisina kurongeka uye takaradzikwa kumashure, uye kuti izvo hazvina basa futi.
Izvo zvakanaka kana iwe uri kunyora yako wega blog nezve hupenyu hwako, uye kuti uri kungotarisira shamwari shoma kuti dziverenge. Iwe unogona kuve usina kurongeka sezvaunoda, kuita zvikanganiso kuchishuwo chemwoyo wako, uye kunyange kuzadza zvawatumira nazvo kutuka kusingabvumike. (Tichitarisa iwe, Iwo maBloggi.)
Asi kana iwe uri kutaura nezve rako bhizinesi, yako mubatanidzwa, kana yako indasitiri, iwe unofanirwa kuchengetedza zvese zvakachena uye zvisina kukanganisa-sezvinobvira.
Haisi chivi kana iwe ukakanganisa. Yakawanda nguva yandaita zvikanganiso pane angu blog mablog, kunyanya iwo andinotaura nezve kukosha kwegirama yakanaka uye nyora. Asi ini ndinogona kugara ndichidzoka kuti ndinoichenesa. Ndicho chinhu chikuru pamusoro peku blogga: hapana chisingaperi, semagazini kana bhurocha. Iyo static, inorarama gwaro. Chiitiko iwo mapostori ane makore matatu ekuberekwa.
Saka kana iwe ukakanganisa kana maviri, usaore moyo. Iva nemunhu waunovimba avatarise uye akupe mhinduro dzakavimbika Wobva wadzoka wo gadzirisa chero chawakarasikirwa panguva yako yekutanga vaviri kutenderera kwekugadzirisa.
Nekuti nenzira kwayo kana zvisizvo, iyo nitpickers iri kunze uko. Uye vari kuuya kwauri.
Tags: grammarnyora dzemutaurokunyora
Kukadzi 6, 2010 na11: 54 PM
Ini handikwanise kuisa mumazwi kuti ndinotenda sei ziso rako nekutsvaga kukanganisa kwangu! Ini ndinowanzo nyora murukova rwekuziva uye ndotarisa pamusoro pezvikanganiso zvangu ndichiratidzira zviri nyore sepaya pandakaanyora. Kamwe kutukwa. Ndatenda kunaka kweshamwari!
Pandinenge ndiri mupfumi uye ndine mukurumbira, ini ndinotofanira kukubhadhara iwe! 😀